बढीमा १० देखि १५ मिनेट! अनि त्यही मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नि? आधा मिनेट!
तर, सोच्नुस् त, देशभरि नै उम्मेदवारी दिने प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वलाई आफ्ना सबै उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपरे कति मिनेट लाग्ला? यसको सहज उत्तर नआउन सक्छ। एक मिनेटमा दुईवटा मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि देशभरिका सबै स्थानीय तहका सबै उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा साढे १२ दिन लाग्न सक्छ। त्यो पनि प्रतिमिनेट दुईवटाका दरले चौबीसै घन्टा हस्ताक्षर गरे।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मालाई अहिले यही व्यवहारिक कठिनाइ परेको छ। पार्टीले विश्वकर्मालाई गोरखा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। गृहजिल्ला अर्घाखाँचीमा रहेका विश्वकर्मा आफू स्वयं गोरखा जान सक्ने परिस्थितिमा थिएनन्। त्यसैले, उनी आइतबार साँझ राजधानी आइपुगे। र, सोमबार केन्द्रीय कार्यालयबाट गोरखामा पार्टीले पठाउने उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्न थाले।
उनका अनुसार मनोनयन पत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको दस्तखतका अतिरिक्त नामसमेत लेख्नुपर्ने रहेछ। विश्वकर्माले प्रत्येक मनोनयन पत्रमा आफ्नो नाम लेख्ने काम परिवारका सदस्यलाई लगाएर हस्ताक्षर आफूले गरेको बताए। यति गर्न पनि सोमबार झन्डै आठ घन्टा लागेको उनले जानकारी दिए। ‘झन्डै आठ घन्टा धम्मरधुस लागेर हस्ताक्षर गर्दा मेरो हात, जीउ पूरै दुख्यो,’ उनले भने, ‘राति सुत्नै गाह्रो भयो।’
बुधबार, बैशाख ६, २०७४ १३:३२:५१